Samy efa nigadra… : saron’ny polisy ekonomika ireo mpisoloky momba ny tany | NewsMada
Samy efa nigadra… : saron’ny polisy ekonomika ireo mpisoloky momba ny tany
Voasambotry ny polisy ekonomika teny Ankorondrano ny alatsinainy maraina teo ireo olona dimy raindahiny amin’ny fisolokiana momba ny tany. Vehivavy ny telo amin’ireo mpisoloky ireo raha lehilahy kosa ny ambiny. Samy efa nigadra teny Antanimora noho ny fisolokiana izy dimy ireo, araka ny fanazavan’ny polisy…
Tambajotra mpivarotra tany amin’ny alalan’ny taratasy hosoka ireto saron’ny polisy ekonomika ireto. Mbola hita tany amin’izy ireo koa ny kara-panondro hosoka marobe sy taratasy tany maromaro ary seky miaraka amin’ny kara-panondro hosoka amin’ny anaran’ilay olona ao anaty seky. Araka ny fanazavan’ny polisy, tonga nametraka fitoriana teny amin’ny polisy, ny asabotsy 14 oktobra 2017 lasa teo ny olona saika hividy ilay tany satria nahatsikaritra izy ireo fa misy zavatra tsy mazava momba ilay tany saika hovidiany.
Nametraka ny vela-pandrika avy hatrany ny polisy mba hahafahana misambotra ireo mpisoloky ka noraisim-potsiny teny Ankorondrano izy ireo. Mbola teo am-piandrasana ny ambim-bola vidin’ny tany ireto olona dimy ireto tamin’io fotoana io. Efa maty paika tanteraka ny fomba fiadin’ireto mpisoloky ireto. Mody mijery izay tany tsy kitihan’ny tompony izy ireo ka alainy amin’ny antsipiriany any amin’ny domaine ny momba ilay tany sy ny mombamomba ny tompony. Rehefa hitany ny anaran’ilay tompon’ny tany dia manomboka manao ny kara-panondro hosoka amin’ny anaran’ny tompon’ny tany izy ka alainy ny “situation juridique”-n’ny tany.
Mandefa fampilazana any amin’ny gazety amin’izay izy ireoavy eo mitady mpividy. Rehefa misy olona mijery ilay tany dia milaza izy ireo fa azy io tany io. Mampiseho ny taratasy mahakasika ny maha azy ireo ny tany izy ireo amin’izany ka dia roboka ireo mpividy tany.
Tany iray mirefy 3 ara 85 eny Ivandry no nokasain’izy ireo hamidy 70 tapitrisa Ar. Tsy eto an-toerana ny tompon’ity tany ity fa any ivelany. Efa nandraisana vodiondrim-barotra 2 200 000 Ar izany ka tamin’io alatsinainy io no foana hanomezana ny ambim-bola rehetra.
Niaiky ny heloka vitany ireo mpisoloky ary efa fitoriana telo samy hafa ny voarain’ny polisy momba azy ireo.